Yako chaiyo nzira - 7 maonero ekutanga kudiridza - Nhau dzeMbatatisi
Kunyangwe makore mashanu apfuura, varimi vemiriwo vazhinji vekuUS vakanzwa kusakosha kwekudyara masisitimu ekudiridza nemidziyo. Asi sezvo kunaya kuri kuoma kwenguva yakareba, mapurazi ari kuyedza kutsvaga nzira yakanakisa yekusvetukira mukati pasina kuita zvikanganiso zvinodhura.
Heano mamwe matipi kubva kune vanodiridza nyanzvi nezve maitiro ekutanga.
Yakaderera-Mutengo Zvivakwa Inotendera Remangwana Ramp kumusoro
Kudiridza ndeyekudyara kukuru. Kwete chete mutengo wezvivakwa zvemadiridziro, asiwo mvura nemagetsi.
Kazhinji, tinoona varimi vachitora nzira inochengetedza kana vachiedza nzira nyowani. Ivo vanoda nzira yekuita kuyedza kwavo uye kuongorora pasina kuwedzera nguva uye pamusoro pezuva ravo ratove rakabatikana.
Kugona kuongorora kubudirira kwechirongwa chitsva chemadiridziro kwakakosha. Uye kuwedzera simba rezuva, rakabatana-pasi maseru ekucherechedza midzi ingangoita sediki, inowedzera mari. Muchokwadi, zvinouya nezvakawanda zvakanaka izvo, nekufamba kwenguva, zvinozvibhadhara pachazvo. Kune imwe, zvinopa murimi kugona kuongorora mimwe minda kana kuenzanisa nzira dzinoenda kuminda dzakasiyana pasina kushanyira minda mumunhu.
Kuva nemidzi-yakatarwa data inodzivirira "pfapfaidza uye namata" - kudiridza munda uye kutarisira kuti chimwe chinhu chakanaka chinoitika. Zvidzidzo zvichibva pane zvakaunganidzwa kubva muna1950 kusvika 2015 zvinoratidza kuti kungowedzera kudiridzira chibage, soya, gorosi remuchirimo, gorosi remuchando, mhunga, donje, bhari, oats uye alfalfa, zvinogona kuburitsa 210% kusvika 250% zvakanyanya kupfuura kana uchivimba nemvura chete. Izvo zvinoita sekukunda kukuru.
Nekudaro, izvo zviri chaizvo kusiya mari patafura. Iyo inotevera yekushanduka ndeyeku flip iyo yazvino "yakatwasuka" nzira (kupuruzira mhiri kwemunda) pamusoro wayo. Maitiro iwayo anotora kuti sezvo ivhu rakanyorova, riri kubatsira midzi.
Kutarisa pasi pasi munzvimbo inoshanda midzi kusvika pamasendimita makumi mana nemasere ndiyo yatinoti nzira yakatwasuka. Achishandisa nzira nyowani iyi yakatwasuka yekutarisa pamidzi yezvirimwa yega yega, murimi anogona kuwana kusvika kumwe makumi mana muzana goho pamusoro pekuchengetedza mvura yakakosha uye zvinovaka muviri zvinodhura. Nzira yakatwasuka inoita kuti murimi akwanise kudzora nguva uye huwandu hwediridziro pamwe nezvikafu zvinoitisa kune hutano hwezvirimwa, kuenderana uye goho
Tanga Zvidiki uye Dzidza Sezvaunoenda
Isu tinogara tichikurudzira varimi vedu kuti vatange nzira diki uye vawedzere acreage sezvo yavo yekunyaradza mwero inowedzera. Imwe acre mwaka uno, 10 maeka mwaka unotevera, kwozoti purazi rese. Mira kusvikira iwe wanyatsoziva hwaro hwekudonha pamusoro pemakore mashoma ekutanga usati wafunga nezve advanced sensors. Kudiridza, kunyanya kudonha, kunoda shanduko huru munzira yaunogadzirisa mbesa dzako uye haifanire kutorwa zvese kamwechete. Iwe unongodzidza neruzivo.
Jerry McDonald, Mutungamiri, Kukura Kudiridza
Kwayedza Temp Equipment Kutanga
Kune akasiyana siyana anotakurika kana enguva pfupi ekudiridzira masisitimu aripo, senge hose reels uye pamusoro pevhu pombi masystem (poly, layflat, nezvimwewo). Kana murimi achifanira kungopota achiisa mvura yekuwedzera, iko kushandisa masisitimu anotakurika sarudzo. Kana uye kana zvikave zvikawanda zvechinodiwa chinodiwa, ipapo nzira mune yekusingaperi system inofanirwa kutariswa. Chero zvazvingaitika, kuona nguva yekuisa mvura inhanho yakakosha mukuita kwekudiridza. Nekudaro, iwe unogona kuwana izvi nemutengo mushoma nekuyera iwo chaiwo midzi nzvimbo yemvura mamiriro uye nekuisa mvura chete pazvinenge zvichidikanwa.
Tom Penning, Mutungamiri, IRROMETER Kambani Inc.
Pivot Inotengeka Zvinoshamisa
Kuwedzera kudiridza papurazi hakuna chimwe chinhu kunze kwekuwedzera "inishuwarenzi yekusanaya kwemvura." Kana murimi aine minda inozobatsirika nekuona mvura yakavimbika uye isingachinji yezvirimwa, saka kudiridza inzira yakakodzera.
Kudiridza kwepivot hakusi kudhura sekufungidzira kunoita varimi vazhinji. Iyo chaiyo mvura inoda kune yakawanda zvirimwa ingori chete nezve matanhatu marita paminiti / acre isina kunaya. Asi masisitimu mazhinji akanyanyogadzirirwa kutsiva kushomeka kwekushandisa kwemvura. Nekugadzira nzira yakasarudzika, inoshanda pivot yekudiridza, varimi vanogona kudzora kusanzwisisika kwekunaya kwemvura uye nekuona huwandu chaihwo hwemvura inoshandiswa kudiridza.
Kushandisa huwandu hwakaringana hwemvura panguva yakakodzera kwakakosha kuti uwane goho rakanaka, asi zvakare zvakakosha kuti uishandise zvakafanana. Zvirongwa zvekudiridza zvepamusoro zvinogona kusaperera munzvimbo ino, asi pivot masisitimu anoshandisa mvura zvakaenzana mumunda zvakaringana chiyero chakaringana, zvichireva kuti vanogona kuwana hunyanzvi hwepamusoro nemitengo yakaderera pane mamwe marudzi ekudiridza.
Pivot yekudiridza masisitimu ari nyore kushanda uye anogona kunyanya kugadzirwa uchishandisa kure yekutarisa uye yekudzora tekinoroji, saLindsay's MundaNET. Ivo vanozvikweretesa ivo pachavo kune chirimwa modelling uye yekudiridza kuronga tekinoroji, saFarmNET Advisor, pasina kuda kushandisa mashuvhu evhu uye mamwe maseru anodhura. FieldNET Advisor chishandiso chakazvimiririra chekuronga chishandiso icho chinorerutsa sarudzo dzekudiridzira kuvarimi nekupa mazano pane nguva, kupi uye yakawanda sei kudiridza.
Farris Hightower, Mutengesi Wedunhu Rekutengesa, Lindsay Corporation
Shanyira Vanyoro Vanodiridzwa
Varimi vari munzvimbo dzisina kudiridzirwa kare vachazvibatsira zvakanyanya nekushanyira matunhu enyika anga achidiridzira kwechinguva.
Semuenzaniso, kana murimi weapuro muEastern US asina kudiridza munguva yakapfuura uye ari kufunga kutanga, vanogona kushanyira nyika yeWashington. Izvi zvichavabatsira kuti vanzwisise kuti sei varimi vemaapuro vachishandisa kudiridza uye kusasairira kudiridza. Iye zvakare anodzidzira maitiro avo echando anodzivirira neasaswa. Uye ndeapi makore mukukudziridzwa kwemiti zvakanakira vanosimudza maringe kana kudonha iri sarudzo iri nani.
Varimi vemiriwo vanogona kushanyira Central Valley yeCalifornia, uko mashandiro anonyanya kushandisa solid set sprinklers uye yekudonhedza tepi. Dzimwe sarudzo ndeye Washington kana Idaho. Iko, mapurazi anoshandisa pivot kudiridza kazhinji kurima mbatatisi, karoti, uye chibage chinotapira. Ivo vese vanofanirwa kutsvaga iro basa rakasiyana siyana rekudiridza raungaite mukuwedzera goho. Vazhinji vanogona kuwana kuti kuisa madiridziro ane ROI yakanaka kunyangwe mamiriro ekunze akasachinja.
John Rowley, Rotator Chigadzirwa Maneja, Nelson Irrigation Corporation
Renda Usati Watenga
Kumadokero, masisitimu ekurenda anowanikwa pazvirimwa zvemitsetse. Tanga nechimwe chinhu nenzira iri nyore kushanda; kukwidziridzwa kunowanzo kuve nyore.
Jim Clare, CEO uye Muvambi we Pacific Kumadokero Kudiridza
Sefa Mvura Yako
Vazhinji varimi vane akawanda masisitimu emvura uye zvinopihwa mvura Kunyangwe mvura ichibva mumadhamu, madziva, matsime, kana nzizi nehova, dzinofanirwa kusefa mvura yacho. Kutanga nzira yekubuda uchiisa firita system. Mumwe wevanovatengesera anozovapa rondedzero yakanaka yekuti filtration system inoshanda sei. Mari yekutanga haizove yakanyanya kudaro. Zvichava zvakanaka vasati vawana mari hombe yekuisa mafirita pane zvese zvavanowana mvura.
Daniel S Flanick, Mutungamiriri, Tekleen
Maitiro Ekutanga Kudiridza Zvirimwa Zako ZveMiriwo nenzira Chaiyo
/ kudiridza /
Tags: yepakati pivot kudiridzaKudonha Kudiridzakusasa kudiridza
Mhando mbiri dzembatatisi itsva dzinogona kusimudzira goho ne25%